မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကိုလာရောက်ကြည့်ရူ့ကြသူအပေါင်းကို ကျနော် သာကီမင်းသားလေး မှ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ပန်းတိုင်ဆီသို့ ( ၄ )
ဖွားဘက်တော် အချင်း ဆန္န
ငါ၏ ရဟန်းပြုခြင်းသည် မယုတ်မာ
ပန်းတိုင်ဆီသို့ ( ၃ )
တိမ်တွေလည်း ရှင်းလို့ပေါ့ ...။
ကဏ္ဍကမြင်းတော်ကို ယခု ကချေ
ယနေ့ ငါ့ကို ကူပံ့လော့
သင့်ကိုမှီ၍ သုံးလီသော ဘဝနှောင်ချိုင့်မှ
လောကကိုလည်း ငါ အလှဆင်ပေအံ့.,.။
ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ။
ိဝိပဿနာတရား အားထုတ်ရာတွင် ပဓာနိယင်္ဂတရား (၅ )ပါး
ပန်းတိုင်ဆီသို့ ( ၂ )
ဆရာဇော်ဂျီ ဗေဒါလမ်းကဗျာများ (21)
ရင်ထဲမှလာသောကလောင်ရှင်များဇေယျာလင်းအမရာဆရာအောင်သင်းအိမ့်ချမ်းမြေ့ဆရာမကြည်အေးလွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်)မိုဃ်းဝေးခရမ်းပြာထက်လူသစ္စာနီညလင်းဖြူဆရာအတ္တကျော်ဆုကဗျာမွန်းသက်ပန်(ဆေး-၁)သူရဿဝါပန်ဒိုရာမယ်ကိုးနိုင်းနိုင်းစနေချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)မြသွေးနီမောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ)
ဒီဘလော့အားလာရောက်သူအပေါင်း ချမ်းသာသုခပြည့်ကြပါစေ. Watermark theme. Powered by Blogger.